Gabdhihii K.koleyga oo si diiran u soo dhoweeyey Xaawo Taako oo dalka kusoo laabatay + sawiro | HobyoNet.Com
Sports-hobyonet)Ciyaaryahanadii kubadda Koleyga xulka qaranka iyo kooxdii Jeenyo Xaawo sheikh Xaawo Taako ayaa maanta dalka dib ugu soo laabatay ka dib in ka badan 20 sano oo ay dibadda ku nooleyd.
Gabdhihii kubadda Koleyga ee qaranka dalka iyo naadiyada kala duwan,oo ay hogaamineysey Marwo Khadijo Dahir oo ah Gudoomiye ku xigeenka xirirka ciyaaraha Fudud ayaa si diiran garoonka aden cadde ugu soo dhoweeyey Xaawo taako iyagoo muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin in mar kale ay dib u arkaan Xaawo Taako oo dalka mudo ka maqneyd.
Khadijo Dahir,Geediyo Ali,Abshir,Faadumo Aweys,Caasho Taraafiko,Caasho dheer iyo Mulki Nuur Muudey ayaa dhamaantood ka shekeeyey malmihii wanaagsanaa ee Xaawo Taako iyo xidigo kale iskula ciyaari jireen garoomada dalka, waxaana ay xuseen inay si weyn ugu faraxsan yihiin in halyeeyada kusoo dhoweeyaan Muqdisho caasimadda dalka.
Xaawo Taako oo halkaa ka hadashey ayaa sheegtey in maanta ay taariikh wanaagsan u tahay in mar kale ay dalkeeda dib ugu soo laabato oo ay aragto sxbadeedii Kubadda Koleyga ee beri samaadkii.
“Ma garan karo sida dareenkeygu yahay waxaan ku hadlo ayaan aqoonin farxad darted, garoonkan waxaan ka tegey isagoo sidan ka fiican,waxaana diyaar u ahay in dalka wixii aan awoodo u qabto”ayey tiri iyadoo dareenkeedu isbedeley.